ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် သမားများအား ကန့်ကွက်ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ပွဲ မွန်ပြည်နယ် အတွင်းမှ ဒေသခံ ၁၅ဝ? - Yangon Media Group
ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် သမားများအား ကန့်ကွက်ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ပွဲ မွန်ပြည်နယ် အတွင်းမှ ဒေသခံ ၁၅ဝ?
မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားအင်အားစုများအသင်း(မွန်ပြည်နယ်)မှ ဦး ဆောင်ပြီး ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများ၏အကြမ်း ဖက်လုပ်ရပ်များအား ဆန့်ကျင် ကြောင်းနှင့် ပြည်ပမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများသည် မိမိတို့တိုင်း ပြည်အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးနေသဖြင့် ကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ် ဖော်ပွဲကို အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီမှစတင်၍ မော်လမြိုင်မြို့၌ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများသည် ဖက်တန်းရပ်ရှိ ပြည်နယ်ခန်းမရှေ့မှ စတင်လူစုပြီး ဒိုင်းဝန်ကွင်းလမ်းမကြီးမှ အတ္ထရံဟိုတယ်ကွေ့ထို မှတစ်ဆင့် ကမ်းနားလမ်းအတိုင်း လမ်းလျှောက်၍ကြွေးကြော်သံများ ကြွေးကြော်ကာ မော်လမြိုင်မြို့ ကမ်းနားလမ်း၊ ညဈေးတန်းအထိ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့သည် ကမ်းနားလမ်း ညဈေးတန်းရှိစင်မြင့်၌ ရန်ကုန်မြို့မှ ဆရာတော် ဦးဇဋိတ၊ ရေးမြို့နယ်မှ မွန်အမျိုးသား ဦးနိုင်လင်းဦး၊ ကိုမင်းထွန်း(အည တရကပ္ပိယ)၊ ကိုဝင်းနိုင်(ဇင်းကျိုက်)၊ ရှေ့နေကြီး ဦးအေးပိုင်တို့က ဟော ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲသို့ မွန်ပြည်နယ် ၁ဝ မြို့နယ်မှ အမျိုးသားရေးဆရာတော် သံဃာတော်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား အင်အားစုများအသင်းဝင် ၁၅ဝဝ ခန့်တက်ရောက်ကြောင်း သိရသည်။